Livestorm: Manaova drafitra, manatanteraka ary manatsara ny paikadinao Webinar miditra | Martech Zone
Livestorm: Manaova drafitra, manatanteraka ary manatsara ny paikadinao Webinar miditra
Alakamisy, Desambra 3, 2020 Alakamisy, Desambra 3, 2020 Douglas Karr
Raha misy indostria iray nipoaka tamin'ny fitomboana noho ny fameperana sy ny fanidiana ny dia, dia ny indostrian'ny hetsika an-tserasera. Na fihaonambe an-tserasera izany, fampisehoana fivarotana, webinar, fampiofanana ho an'ny mpanjifa, taranja an-tserasera, na fivoriana anatiny fotsiny… ny ankamaroan'ny orinasa dia tsy maintsy nanam-bola amin'ny vahaolana amin'ny kaonferansa.
Paikady miditra no entin'ny webinar ankehitriny… saingy tsy tsotra araka ny fahitana azy. Ny filàna mampifangaro na mandrindra amin'ireo fantsom-barotra hafa, misintona rindrambaiko sy mifanentana, pejy fandraisana, rindrambaiko fampidirana endrika, rindrambaiko video, ary famakafakana dia saika ilaina foana hananganana paikady an-tserasera tsy misy tohiny hatramin'ny voalohany ka hatramin'ny farany.
Rivotra mivantana: Webinars mandeha mivantana, mivantana ary mandeha ho azy
Livestorm dia nanangana rindrambaiko webinar iray tsotra kokoa, marani-tsaina kokoa, tsara kokoa izay mifantoka amin'ny traikefan'ny mpampiasa, ny fomba fijerin'ny marketing ary ny mandeha ho azy.
Azonao atao ny mihazakazaka amin'ny fomba webinar amin'ny alàlan'ny rindrambaiko:
Live Webinars - Livestorm dia vahaolana HD miorina amin'ny browser, tsy mila fampidinana rindrambaiko na inona na inona. Ary, mamela ny fizarana efijery, Youtube na stream mivantana hafa hampidirina ao amin'ny tranokalaninao.
Webinars miverimberina - Manomeza webinar iray amina fotoam-pivoriana maro ary tazomy ilay pejy fitobiana mitovy. Ny mpitsidika dia afaka misafidy ny datin'ny safidiny avy amin'ny pejy fisoratana anarana.
Webinars efa voarakitra an-tsoratra - Raha mila traikefa amin'ny webinar tsy misy kilema ianao, ny fomba iray hanaovana an'io dia ny firaketana mialoha sy ny fampidirana ny webinarinao hilalao amin'ny mpihaino. Milalao fotsiny!
Webinars on-demand - Ampidiro ny webinar anao ary avelao ny prospect hijery ny horonan-tsary tianao.
Ny tsara indrindra, tsy misy fetra fitahirizana hamerenana ireo webinar-nao!
Anisan'izany ny endri-javatra mivantana
Fisoratana anarana Webinar - Ny endrika namboarina na ny pejy fisoratana anarana dia natsangana. Manampia saha fanampiny hanamafisana ny fanantenanao. Ary azonao atao aza ny mampiditra ireo endrika ao amin'ny tranonkalanao.
mailaka Marketing - Ampidiro ny fifandraisanao, mandefasa fanasana mailaka anao manokana, ary mandefasa fampahatsiahivana ho an'ny mpanatrika anao,
Fifandraisana amin'ny mpijery - ny chat, ny poll, ny fanontaniana ary ny valiny, ary ny mpanolotra dia afaka mandray anjara amin'ny fotoana tena izy miaraka amin'ny webinar-nao.
tatitra - Alao ny loharanon'ny fisoratana anarana sy ny referrals, jereo ny fantsona mpanatrika, ny fandraisana anjara amin'ny làlana, ary jereo ny piraofilin'ny registrant ho an'ny webinar anao.
Fampiharana tag - Ampio Google Analytics, Intercom, Drift, na marika script hafa amin'ny pejin'ny fisoratana anarana.
Integration - Esory ny mombamomba anao rehetra, ny valin'ny fandatsaham-bato, ny angona fanadihadiana, na ampidiro amin'ny Zapier, Slack, Marketing amin'ny mailaka, Marketing Automation, Landing Pages, Gateways fandoavam-bola, Advertising, Live Chat, na tsindrio CRM amin'ny alàlan'ny fampidirana am-pamokarana ny Salesforce , Microsoft Dynamics, Pipedrive, Salesmate, Zenkit, na SharpSpring.
Webhooks sy API - Ampidiro ny tranokalanao na tranokalanao manokana miaraka amin'ny API matanjaka sy tranokalan'izy ireo.
Andramo maimaimpoana maimaimpoana izao
Fambara: mpiara-miasa amiko aho Rivotra mihatra.
Tags: mampihiditra barotraRivotra mihatraMicrosoft Dynamicswebinars on-demandPipedrivewebinars efa voarakitra an-tsoratrawebinar miverimberinasalesforceMpivarotrasharps springwebinarfampahatsiahivana mailaka webinarmarketing amin'ny webinarsehatra webinarfisoratana anarana webinarWebinarszenkit